Jarjarka falka Jarmalka
Maadada aan ku soo qaadan doono casharkaan: Jarjarka falka Jarmalka Saaxiibbada qaaliga ah, qodobkan, waxaan ku siin doonnaa macluumaad ku saabsan shaqallada Jarmalka, xididka falka, dheereyn aan dhammaad lahayn iyo isku xirnaanta shaqallada Jarmalka.
Ilaa casharkaan, waxaan aragnay mowduucyo fudud oo loogu talagalay bilowga sida maalmaha Jarmalka, bilaha Jarmalka, tirooyinka Jarmalka, xilliyada Jarmalka iyo sifooyinka Jarmalka. Kuwaas waxaa u dheer, waxaan aragnay casharo badan oo Jarmal ah sida ereyo Jarmal ah oo aan u adeegsan karno nolol maalmeedka aadna waxtar badan u leh. Casharkaan, Xuruufta Jarmalka Waxaan taaban doonnaa mowduuca. Kadib markaan aqrino casharkeena, waxaan si adag kugula talineynaa inaad ka daawato sheekada fiidiyowga qeybta hoose ee bogga.
Mawduuca isku xidhka falka Jarmalka waa maaddo u baahan in diiradda la saaro, waana in si wanaagsan loo barto oo si wanaagsan loo xafido. Suura gal naguma aha inaan sameysano jumlado si sax ah adoon baran barashada ficilka Jarmalka. Waxaan nahay hadda ugu horreyntii waa ficil, waa maxay xididka falka, waa maxay falka bilaa dhamaadka ah, Waa maxay ku xirnaanta shaqsiyeed, Sida laysugu xiro ficillada Jarmalka Waxaan diiradda saari doonaa arrimaha noocan ah ee aasaasiga ah. Halkii aad siin lahayd isku xidhka falka Jarmalka oo diyaar ah, Falalka Jarmalka Waxaan ku baraynaa caqliga shaqada si aad wax u toogato.
Falal Jarmal ah oo aan dhamaad lahayn
Sidaad ogtahay, shaqalka aan dhamaadka lahayn waxaa looyaqaanaa bilaa biin. Si kale haddii loo dhigo, qaabka cayriin ee fal, oo ku qoran qaamuusyo ayaa loo yaqaan qaabka falka ee aan dhammaadka lahayn. Horgale aan dhammaystirnayn oo af Turki ahgaare iyo -mek lifaaqyo. Tusaale ahaan; kaalay, kaalay, samee, wax, akhri, wax arag Ficillada sida kuwa aan dhammaadka lahayn waa fal. Si ficil loogu xidho af turki, siffiyeedka bilaa micnaha ah ayaa laga dhaafay oo xiisadda ku habboon iyo shaqsiyeynta shaqsiyaadka ayaa lagu daray xididka falka.
Tusaale ahaan; aan dhammayn Readgaare fal -gaare Markaan tuurno kulelka aan dhammaystirnayn "ReadFalka ”ayaa hadhay. Oku dhab ah, Readgaare waa xididka falka. Aynu u nimaadno waqtiga ku habboon iyo shaqsiyeynta erayga akhri:
Oku -saxaro-um, halkan "Read"Xididka falka,"saxaro"Waqti xaadir ah,"um”Qofku (aniga) ma dahab baa? Adigu waad akhrinaysaa ama waan akhrinaynaa ama akhrinaynaa Ficillada sida lagu kujuuray xilligan xaadirka ah laakiin loogu talagalay shakhsiyaad gooni ah. Adiga ayaa aqrinaya (adiga), anaga ayaa aqrineyna (anaga), iyagu wey aqrinayaan (iyagu).
Waxaan u maleyneynaa Noocyada aan dhammaadka lahayn ee shaqallada Jarmal Waxaan bixinay macluumaad ku filan oo ku saabsan.
Sida la arki karo, markaan rabno inaan ku xamino ficil sida ay yihiin shaqsiyaadka ku hadla luqada Turkiga, waxaan ku darnaa waxyaabo gooni ah xididka falka qof walba. Tani sidoo kale waa kiiska Jarmalka. Af Turki ah -gaare iyo -mek Suufiyeyaal aan dhammaad lahayn oo Jarmal ah -en iyo -n lifaaqyo. Caadi ahaan Suufiye -en waa dheef-dheere, -n dabakhku waa dhif. Fal ficil ah oo af Jarmal ah -en ama -n ku dhammaado lifaaqa. Fal ficil ah oo af Jarmal ah -en ama -n Markaan ka saarno lifaaqa, waxaan helnaa asalka falkaas. Qaamuusyada ama liisaska ficillada, qaabka falka aan dhammaadka lahayn ayaa had iyo jeer loo qoraa. Tusaale ahaan, u dhigma Jarmal ee falka inuu ciyaaro waa spielen.
Infinitive spielen ka fal -en markaan ka saarno dhejiska oyun hadalka weli, oyun erey spielen waa xididka falka. Xiisad iyo shaqsi ayaa ku dhajiya xididkan falka oyun ayaa lagu daray ereyga. Tusaale kale bartaan Aan siino falka, bartaan Jarmal u dhigma falka lernen waa fal. bartaan dheereyn aan dhammaad lahayn oo ka socota falka ie -en markaad goosato dalaggaaga lerne xididku wuu hadhaa. Marka la isku xidhayo ficillada Jarmalka, xaragada iyo shaqsiyeynta shaqsiyaadka waxaa lagu daraa xididkan falka. lerne ayaa lagu daray ereyga.
Kadib markaan bartay fikradaha ku-xirnaanshaha iyo xidid-ka shaqalka Ku dhajinta ficillada Jarmalka waan dhaafi karnaa Aynu tusno isku-xirnaanta ugu fudud ee falka ugu fudud tusaale ahaan xagga hoose.
Lernen, si aad wax u barato, aan ku xirno ficilka xilligan xaadirka ah sida ay tahay qof walba.
Waa inaad fiiro gaar ah siisaa oo aad xafidaa lifaaqyada lagu daray falka.
LAHAYNTA GERMAN LERNEN VERBAL
KU DARAN NET
I e lern-e waan baranayaa
du st lern-st Waad baraneysaa
er t arka-t Wuxuu baranayaa (lab)
sie t arka-t Waxay baraneysaa (dumar)
es t arka-t Waxay baraneysaa (dhexdhexaad)
waxaan en lern-en Waan baranaynaa
EXP t arka-t Waad baraneysaa
sie en lern-en Way baranayaan
Aug en lern-en Waad baraneysaa
kor ku xusan lernen Waxaan aragnay isku xirnaanta ficilka ee xilligan xaadirka ah. bartaan waa bilaa ficilka. Lerner waa xididka falka. Ereyga en waa kuleel aan dhammaad lahayn. Suufiyadu waa xididka falka lerne ayaa lagu daray ereyga. Aynu ku meeraysano fal kale tusaale ahaan.
Soo Jiidashada Jarmal KOOXDA KOOXDA FARMAAJO
I e komm-e Waan imanayaa
du st komm-st Waad imaaneysaa
er t komm-t Wuu imanayaa (wiil)
sie t komm-t Wuu imanayaa (dumar)
es t komm-t Wuu imanayaa (dhexdhexaad)
waxaan en komm-en waan imaanaynaa
EXP t komm-t Waad imanaysaa
sie en komm-en Way imanayaan
Aug en komm-en Waad imanaysaa
Haa saaxiibo qaali ah, korka sidoo kale wuxuu ku qoran yahay Jarmal kommen kuwaas oo yimaado Waxaan ku bixinay tusaalooyin isku xirnaanta ficilka xilligan la joogo. Fikradaha Jarmalka Waxaa lagu sawiray xilligan xaadirka ah sidan. Erayada la keenay salka falka xilligan la joogo ayaa ah sida ka muuqata shaxda kore.
Waxa kale oo aad isku xidhi kartaa shaqalada kale sida ay shaqsiyaadka u eegaan adoo eegaya jadwalka kore, adigoo tusaale u soo qaadanaya.
Xuruufta Jarmalka Mawduuceena la magacaabay ayaa ku sii socon doona casharradeena mustaqbalka. Casharradeenna soo socda, waxaan ku arki doonnaa isku xidhka ereyada Jarmalka iyadoo loo eegayo waqtiyadii hore iyo mustaqbalka. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa macluumaad ku saabsan shaqallada joogtada ah ee Jarmal iyo shaqallada aan caadiga ahayn ee Jarmalka casharradan soo socda.
Muxaadaro Mawduuca Fiidiyowga Jarmalka ee Ficil-celinta Conjugation
Dhamaadka Mawduuca Isku Xidhmada Jarmalka
Soo booqde qaali ah, Xuruufta Jarmalka Waxaan u nimid dhamaadka maaddadayada oo la magacaabay. Waxaad ka heli doontaa tusaalooyin isku xidha ficil casharradeenna soo socda.
Xuruufta Jarmalka Waad qori kartaa waxaad rabto inaad wax ka weydiiso, codsiyada casharka gaarka ah, su'aalaha, faallooyinka iyo dhaleeceynta, iyo meelaha aadan ka fahmin goobta su'aalaha ee ku taal golaha.
Waad ku mahadsantahay booqashada degelkeena, waxaan kuu rajeyneynaa guul noloshaada waxbarasho.
Ha iloobin inaad boggagaya kula talisid asxaabtaada kale.
# Falal Jarmal ah oo aan dhamaad lahayn
# Muxaadaro Mawduuca Fiidiyowga Jarmalka ee Ficil-celinta Conjugation
# Dhamaadka Mawduuca Isku Xidhmada Jarmalka